Gam akporo n'ihi na onye ọ bụla; Kedu ihe bụ bootloader? | Akụkọ akụrụngwa
Anyị niile ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anyị niile maara nke ọma na android Ọ bụ sistemụ nrụọrụ maka mobiles na mbadamba nke Google mepụtara. Ọ bụ ugbu a kachasị eji n'ụwa na klas a nke ngwaọrụ ma ọ dị nso na mbipute ọhụrụ ya na-ahụ ìhè ụbọchị na ahịa. N'oge a ọ dịlarị maka Nexus terminals, n'okpuru koodu aha gam akporo N. Na Google ikpeazụ m / O anyị mụtara nkọwa ọhụrụ nke ngwanrọ ahụ ma anyị makwaara na n'oge na-adịghị anya ọ nwere ike ịdị na ụzọ gọọmentị.
Iji weta gam akporo na ụwa, anyị ga-amalite usoro isiokwu nke anyị ga-akọwa ụfọdụ isi echiche nke ngwanrọ Google. Taa Anyị ekpebiela ịmalite site na ịkọwa ihe bootloader bụ, na ị nụtụwo ọtụtụ ugboro na ikekwe ị ghọtabeghị ihe ọ bụ ma ọ bụ maka ya. N'ezie, ọ bụghị echiche na ngalaba ọha ma ọ dị nwute na ọ dịghị mfe nghọta na nghọta.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere gam akporo na banyere bootlader, nọgidenụ na-agụ ma dịrị njikere ịbịaru nso nso na sistemụ arụmọrụ nke ọtụtụ ndị ama na ndị mbadamba họọrọ.
1 Kedu ihe bụ Bootloader?
2 Kedu ka Bootloader si arụ ọrụ?
3 Gịnị mere ndị nrụpụta ji egbochi bootloader?
4 Ọ bara uru ị kpọghee bootloader?
Kedu ihe bụ Bootloader?
N'ịkọwa n'ụzọ dị mfe anyị nwere ike ịsị na bootloader bụ aha na-anata na Bekee akụkụ kachasị mkpa nke sistemụ arụmọrụ gam akporo, na ọ bụ na ọ bụ njikwa ahụ na-enye ohere ka ngwaọrụ ahụ malite. Nke a bụ ọrụ maka itinye kernel Linux na sistemụ arụmọrụ gam akporo, n'ihi ya ọ bụ otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke ngwanrọ ahụ.
Enweghị bootloader ọ dịghị gam akporo, karịa ihe ọ bụla n'ihi na anyị agaghị enwe ike ịmalite ya na maka ihe a niile anyị ga-amụta ihe ọzọ gbasara bootloader ngwaọrụ a.
Kedu ka Bootloader si arụ ọrụ?
Dị ka anyị kwurula, bootloader bụ otu n'ime isi ihe dị mkpa nke ngwaọrụ ọ bụla nwere sistemụ arụmọrụ gam akporo. N'agbanyeghị ihe ọtụtụ n'ime anyị nwere ike ikwere onye ọ bụla na-emepụta ihe na-ahụ maka ịmepụta bootloader nke ha ọ bụghị Google. Ma ọ bụ na onye ọ bụla na-arụpụta ngwaọrụ mkpanaka ma ọ bụ mbadamba ga-emepe nke ya n'ihi na ọ ga-arụ ọrụ aka na ngwaike nke ngwaọrụ ọ bụla.
Ugbu a, akụkụ ndị dị mgbagwoju anya ga-amalite ịghọta ihe na ọ bụ na ozugbo anyị gbanye bootloader ọ na-eme ọtụtụ ule iji chọpụta ebe kernel na mgbake ahụ dị, ụzọ abụọ anyị nwere ike isi were mgbe ịmalite ngwaọrụ anyị.
Oge ọ bụla anyị pịa bọtịnụ ike na ngwaọrụ anyị, ọ na-ebu gam akporo ịhọrọ kernel iji malite ya. N'aka ozo ọ bụrụ na anyị pịa igodo igodo ụfọdụ, bootloader ga-ebu mgbake, nke gabu uzo ozo ayi gesi tugharia ya nke oma n’isiokwu ozo dika o gha aduta.
Gịnị mere ndị nrụpụta ji egbochi bootloader?
Dị ka anyị kwurula, ọtụtụ ndị na-emepụta ahịa na-egbochi bootloader ka ọ bụrụ naanị gam akporo sistemụ arụmọrụ nke ndị nrụpụta na-etinye ka a gụrụ, si otú a na-egbochi onye ọrụ ahụ ime mgbanwe na ụzọ dị mfe ma ọ bụ obere mfe ngwanrọ. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ndị nrụpụta na-eji bootloader eme ihe dị ka a unofficial ROM kpochidoro usoro.
Nke mere na onye ọrụ ọ bụla nwere ike iwunye ROM na-enweghị ikike na ngwaọrụ, anyị ga-ebu ụzọ mepee bootloader, yana ọnwụ nke akwụkwọ ikike ahụ. Companiesfọdụ ụlọ ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka Samsung na-akwụ mmasị pụrụ iche n'akụkụ a na site na ọrụ a na-akpọ KNOX Void Warranti ọ na-agụta oge ndị ọrụ na-enwupụta sọftụwia na-enweghị mbinye aka Samsung, yabụ na-akwadoghị.
Mgbe ụfọdụ ọ na-eju anya na ndị nrụpụta na-egbochi bootloader, ma na nke a ga-eme n'ọdịnihu nsogbu na-ezere na karịa ihe niile ndị ọrụ na-eme mgbanwe na-ekpughe onwe ha ihe ize ndụ na n'ọtụtụ ọnọdụ anyị na-amaghị nke akụkụ ha.
Ọ bara uru ị kpọghee bootloader?
Tupu ịza ajụjụ a na-enye aha isiokwu a, ọ ga-edo anya na ịmeghe bootloader enweghị ihe jikọrọ ya na ịmeghe ọnụahịa ahụ, dịka ọmụmaatụ iji nwee ike iji kaadi SIM site na ụlọ ọrụ dị iche. A na - akpọkarị nke a dịka akpọghe ngwaọrụ, ihe na - enweghị ihe jikọrọ ya na isiokwu anyị na - eme taa.
Onweghikwa ihe akpọrọ "rooting" enweghị ihe jikọrọ ya na bootloader, n'agbanyeghị na ọ bụ ọtụtụ ndị ọrụ na-agbagwoju ya anya.
N'ịlaghachi n'ajụjụ dị n'aka, azịza ya nwere ike ịgụ ọtụtụ akwụkwọ, na ọ bụ na n'ọtụtụ oge, ọ bụghị naanị na ọ bụ ihe amamihe ị kpọghee bootloader, ọ bụ ezie na akwụkwọ ikike ahụ nwere ike ịla n'iyi, mana ọ dị mkpa iji mezuo ya iji wụnye ROM, nke anyị nwere ike ịchọ n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ .
N'ezie, azịza ezi uche dị na ajụjụ a kwesịrị ịbụ ee mba na ọ bụ na site na nke a, anyị ga-atụfu nkwa ahụ yana ọdịnihu nke ngwaọrụ mkpanaka anyị ma ọ bụ mbadamba ga-abụ ajụjụ. Ọ bụkwa eziokwu na anyị ga-arụtụ aka na nkwa ndị ndị nrụpụta dị iche iche nyere n'ọtụtụ oge agaghị abaara anyị nnukwu uru.
Sistemụ arụmọrụ gam akporo dị mgbagwoju anya ma juputa na nooks na crannies na maka ọtụtụ ndị ọrụ ha enweghị mmasị ma ọ bụ dị mkpa, mana maka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ ha karịrị ihe na-atọ ụtọ. Bootloader bụ otu n'ime nooks na crannies ahụ, enwere ike iji ọtụtụ, ọ bụ ezie na anyị ahụla ihe egwu dị na ya.
You maara ozi niile anyị kọọrọ gị taa ma gbaa gburugburu nke a na-akpọ bootloader?. Gwa anyị ole ihe ọmụma i nwere banyere gam akporo na ihe ndị a nwere i jiworo gị na ngwaọrụ na Google sistemụ. Maka nke a, ịnwere ike iji ohere echekwara maka ikwu na post a ma ọ bụ otu n'ime netwọkụ mmekọrịta anyị nọ na ya na ebe anyị ga-enwe obi ụtọ isoro gị kwurịta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Gam akporo n'ihi na onye ọ bụla; Kedu ihe bụ bootloader?
John Aparicio dijo
Enwerem samsung s2 gt-i9100 nke cyanogenmod 13 tinyere
ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ma ọ bụrụ na ị dere banyere roms ndị a maka ebe 1g
Enwere m ọtụtụ nsogbu ịwụnye gapps
Zaghachi Juan Aparicio
Ngwa 7 nke ichota radar obula ma zere ezi